यो वसन्त ब्रेक हो? | Martech Zone
मङ्गलबार, अप्रिल 3, 2007 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
यो हप्ता म बिदामा छु। यो लगभग मलाई जोरले बाहिर चकले बनाएको छ। मेरो छुट्टी यति टाढा कती जान्छ यहाँ छ:
मेरा दर्जनौं साइटहरू (वा मेरा ग्राहकहरूको साइटहरू) अहिले अपग्रेड हुँदैछ। साइटहरू नयाँ सफ्टवेयरमा नयाँ सफ्टवेयरको नयाँ संस्करणहरूको साथ सारिएका छन्। त्यो, अवश्य पनि जान्छ DNS मुद्दाहरू (मेरो सब भन्दा राम्रो साथी र ग्राहकको साइट एक स्प्यामर पृष्ठ मा राति पुनःनिर्देशित… ugh!), डाटाबेस कनेक्शन मुद्दाहरु, संस्करण मुद्दाहरु, विषयवस्तु समस्याहरु, प्लगइन मुद्दाहरु ... तपाइँ यसलाई नाम दिनुहुन्छ। म आज बिहान :6: .० सम्म अपरान्ह मुद्दा फिक्सिंग गर्दै थिए। मसँग एक साइट बाँकी छ (हो, उही समान!)।
मसँग एक वेबसाइट छ जुन मैले यो हप्ता सुरू गरिरहेको छु (किनकि मसँग अरू कुनै समय छैन) जुन विकासको पछाडि पछाडि छ। यद्यपि यो अहिलेसम्म एकदम राम्रोसँग गएको छ। मैले बाइनरी भौगोलिक डाटाबेस लोड गरेको छु म्याक्समिन्डबाट आईपी ठेगानाहरू र लिखित कोड जुन स्वत: केन्द्र नक्शामा आउनेछ प्रयोगकर्ताको आधारमा भ्रमण गर्दै। को नि: शुल्क संस्करण एपीआई धेरै सहि छैन तर यसले कम्तिमा पनि व्यक्तिलाई ठीक क्षेत्रमा डाइरेक्ट गर्दछ।
वर्डप्रेस को लागी एक प्लगइन निर्माण मा युजर ईन्टरफेस धेरै सफा हेर्न को लागी काम शुरू भएको छ। कार्यक्षमता परिवर्तन हुँदैन, तर हेराई र भावना धेरै सुधार भएको छ (तल हेर्नुहोस्)। मैले सीनलाई सोधें ल्यापटपको साथ Geek मलाई मद्दत गर्न। म WP डिजाइनहरू र क्रस ब्राउजर मुद्दाहरूको साथ ठीक छु, तर म निश्चित छु कि शनले यो घर ल्याउन सक्छ।
र निस्सन्देह, मेरा बच्चाहरू घर छन्। मेरो छोरो प्रोमको लागि तयारी गर्दैछ र जाँदै छ इंडियाना विश्वविद्यालय। मेरी छोरी पूर्ण "प्रेमिका मोड" मा भरी छ त्यसैले किशोर किशोरीहरू सँग यो फोन ग्रान्ड सेन्ट्रल स्टेसनको रूपमा चलिरहेको छ। म झ्याल बाहिर उफ्रिने क्रममा छु! भाग्यवस, म दोस्रो तलामा छु।
यसमा थप्नुहोस् जुन म मेरो परामर्श र्‍याम्प गर्न चाहन्छु (मैले गत बर्ष आयमा धेरै वार्षिक कटौती गरेँ) यसैले मेरो हप्ता कल र लन्चहरूले भरिएको छ।
छुट्टीको लागि त्यो कस्तो छ? म काममा फर्कन पर्खन सक्दिन ब्रेक पाउनको लागि! (होईन!)
अप्रिल 3, 2007 मा 7: 10 PM
मेरो बिदा जस्तै सुनिन्छ।
मेरा बच्चाहरू पनि यस हप्ता घरमा छन्। त्यो म वा मेरी श्रीमती 🙂 होइन *उनीहरू* को लागि छुट्टी हो
अप्रिल 3, 2007 मा 8: 32 PM
हे डग, प्रशासक प्लगइनमा तपाईसँग काम गर्न तत्पर हुनुहुन्छ।
मैले मानिसहरूका लागि अनुकूलन WP प्लगइनहरूको गुच्छा गरेको छु तर जनताको लागि कहिले पनि जारी गरिन तर त्यो चाँडै आउने दिनहरूमा परिवर्तन हुनेछ जब मैले यसलाई थप परीक्षणहरू मार्फत चलाउनेछु।
यदि तपाइँको समयतालिका... उह, छुट्टीको समय अनुमति दिन्छ 🙂 म तपाइँलाई यसमा टायर किक गर्न चाहन्छु।
अप्रिल 3, 2007 मा 10: 40 PM
तपाइँले मलाई चीज बनाउँदै हुनुहुन्छ यदि म मेरो छुट्टीमा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ! बच्चाहरूले तपाईंलाई नट ड्राइभ गर्नेछन्!
अप्रिल 4, 2007 मा 1: 17 एएम
तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको WordPress प्लगइनमा म साँच्चिकै रुचि राख्नेछु। यो अनौठो छ कि यो पोस्टिंग इन्टरफेस बाहेक WP चट्टानको बारेमा सबै कुरा! यसमा मेरो समस्या यो हो कि यो धेरै अव्यवस्थित छ, र तपाईंले अव्यवस्था हटाउन र आफ्नो लेखनमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्न।